'Luyaphela uhlelo lukaThandolwethu noTP kwiGagasi FM' | IOL Isolezwe
'Luyaphela uhlelo lukaThandolwethu noTP kwiGagasi FM'
Isolezwe / 19 April 2017, 10:50am / FANELESIBONGE BENGU
UKHULEKANI Shandu okhulumela iGagasi FM othi zizoba khona izinguquko abazozenza uma kuqala isizini entsha esiteshini sabo ngoJuni Isithombe: FANELESIBONGE BENGU
KUVELA ukuthi kuyaphela ngohlelo lwantambama olwethulwa nguThandolwethu noTP kuGagasi FM njengoba sebeqalile ukubizwa abasakazi ngamunye ngabaphathi balesi siteshi kuyobhungwa ngezinkontileka ezintsha.
Lolu hlelo, i-Afternoon Show Off, ingena ngo-3 kuya ku-6 ntambama phakathi nesonto.
Imithombo yeSolezwe engaphakathi ithe kuleli sonto abaphathi besiteshi bahlangana nabasakazi ukukhuluma ngekusasa labo. IGagasi FM alifani neminye imisakazo eyenza izinguquko ngo-Ephreli kodwa elazo lizenza ngoJuni.
“Luyaphela uhlelo lwantambama. UThando sengathi uyahamba uya kwiVuma FM. UTP yena angazi ngaye mhlawumbe bazomgcina. UThando kodwa uyahamba,” kusho umthombo.
“UMimi (Kesaris, umphathi wezinhlelo) ufuna ukufaka uNomalanga kulolu hlelo kodwa bake baxabana. UNomalanga kusho ukuthi kumele ayeke ithelevishini agxile esiteshini, ngeke,” kuqhuba umthombo.
UNomalanga wethula uhlelo Umswenko kuMTV Base, ulingisa kuRhythm City futhi wethula i-All Access Mzansi kuMzansi Magic.
Omunye umthombo uthe yindaba eyaziwayo eyokuphela kohlelo lukaThandolwethu noTP.
UHeazy owethula isimo somgwaqo ohlelweni lwasekuseni neThe Plug Point noNomalanga ngo-4 ntambama ngoMgqibelo ukhonjwa ohlelweni lwasemini phakathi nesonto ngo-12 kuya ku-3. Lolo hlelo iBig Bang lwethulwa noNomfundo Clarissa noFelix Hlophe owangena esikhaleni esavuleka kushiya kuKini Shandu.
UClarissa kuthiwa uyakujabulela ukusebenza noFelix futhi bayazwana.
Okhulumela iGagasi FM, uKhulekani Shandu, uthe izinguquko zizoba khona uma sekuqala isizini yabo entsha ngoJuni.
“Akukho engingakuqinisekisa okwamanje,” kusho uKhulekani.
Uthe njalo uma kuqala isizini bayahlala phansi babheke ukuthi izinhlelo ngazinye zenze kanjani nokuthi yikuphi lapho zingaqiniswa khona.
“Akukho okusha ngokuthi sibiza abasakazi bethu manje,” kusho uKhulekani.